Ndeipi nzira yekuenda kuChina? Ndege, zvitima uye dzimwe nzira | Kufamba Nhau
Ndeipi nzira yekuenda kuChina? Ndege, zvitima uye dzimwe nzira
Mariela Carril | | China, Inotungamirira, Asia kufamba
Kubva pane imwe nguva kusvika pachikamu ichi China inoramba iri pakati penzvimbo huru dzeAsia kuita rwendo rusingakanganwiki.
Iwo musika wevashanyi uyo unobvumidza ese maviri marongero mafambiro mukushanya uye zvimwe zvega zviitiko, asi kana tikatarisa pamepu tinoona nyika hombe uye iri kure. Hazvigoneke? Hapana nzira! Chii chimwe, hazvingogone kusvika nendege ...
1 Kuenda kuChina pamafambiro epasi rese
2 Kuenda kuChina nendege
3 Kuenda kuChina nenyika
Kuenda kuChina pamafambiro epasi rese
Ehe, iyi sarudzo iwe yaunayo kana iwe ukajoinha rwendo rwekunakidzwa uye iri yeaya eakasarudzwa nemapoka evashanyi anopfuura makore makumi mashanu ekuberekwa.
Ngarava dzepasi rese dzekufamba nenzvimbo yekupedzisira Beijing inosvika pachiteshi cheTianjin kubva kumatunhu ese ekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia uyezve, zvakare kubva kuHong Kong. Mushure meShanghai uye guta guru pacharo, Jin sezvavanogara vachitaura kuguta rino, iguta rinoyevedza rine zvaro zvaro kune mushanyi.
Makoroni zvivakwa zvemhando dzakasiyana, kusanganisira dzeEuropean, nzvimbo dzezvakaitika kare dzinosvika mazana kana asiri zviuru zvemakore (kune Great Wall kupfuura padyo, Huangyaguan Pass), uye inonaka uye yakapfuma gastronomy.
The company Royal Caribbean ine zvikepe zvinoshanyira Tianjin. ari Mufaro of ari Iva, semuenzaniso. Kune mafambiro anofamba kubva kuHong Kong kana kune mamwe maratidziro anobata nzvimbo muJapan.
Kambani iyi irikuita mushe zvekuti shasha yemukurumbira yechiChinese Fan Bingbing ndiye mwari weiyi ngarava, yekupedzisira ngarava huru mumakungwa aya. Kana iwe uchida magwa uye kwete ndege, tarisa kune kwavo kupi nekuti unogona kufamba uchitenderera ichi chikamu chenyika (kusanganisira South Korea, Vietnam neJapan), mumahombekombe epamusoro.
Kuenda kuChina nendege
Ndiyo sarudzo yakanyanya kushandiswa uye magedhi ekupinda anowanzove Beijing kana Hong Kong. Zviripachena, zvakare Shanghai kana zvasvika pakusvika kubva kunyika dzekumadokero.
Kubva pakati peiyi «magonhi»Pamwe sarudzo yakanakisa ndeye Hong Kong nekuti kazhinji inodhura uye ine vhiza yakareba. Chii chimwe, inowanikwa zvakanaka Zvichienderana neyakajairika nzvimbo dzekuenda backpacker, kupfuura izvozvo pachezvayo zvinonakidza uye zvinopa mhando yekujairirana neChina zvachose.
Kuenda kuChina nenyika
Kana iwe uri kutofamba uchitenderera ichi chikamu chenyika unogona kusvika nepasi uye woita muganho kuyambuka kubva kunzvimbo dzinoverengeka yeChina inyika yakakura kwazvo.
Kubva kuPakistan unogona kuyambuka mugwagwa mukuru Karakoram uye usvike Kashgar, mudunhu reXinjiang. Inogona kunge isiri nzvimbo yakanakisa kufunga mamiriro ezvinhu muPakistan nematambudziko ezvematongerwo enyika China anayo nevashoma veMuslim pano.
Kubva kuLaos unogona kuyambuka neBoten kuenda Mengla, mudunhu reYunnan. Kubva kuNepal kune iyo TibetZviripachena, kunyangwe iye achirangarira iro rese nyaya yemavisa uye chaiwo mvumo. Kubva kuVietnam pane matatu matatu sarudzo:
yeiyo Hushamwari Pass kuNanjing
kubva Lao Cai kusvika Kumning
kubva kuna Mong Cai kuenda kuDongxing
Kuyambuka zvakachipa ndiko kwekutanga Nekuti iwe unogona kutora bhazi rehusiku kuenda kuDong Dang uye kubva ipapo kubhadhara mudhudhudhu kuti ufambe makiromita mashoma kuenda kuUshamwari Pass, iyo Youyi Guan muChinese o Huu Nghi Quan muVietnamese.
Muganhu pano unovhura na7 mangwanani, Kusvikira 4pm. Kamwe kudivi reChinese iwe unofamba uchidzika nemugwagwa kuenda kumugwagwa mukuru uye unomirira bhazi kuenda kuPinxiang, makiromita gumi kubva, kubva kwaunogona kukwira mabhazi anowanzoenda kuNanning. Uye kubva ipapo Guilin kune imwezve husiku bhazi kuchovha kuenda ...
Imwe sarudzo kutora iyo chitima chepasi rese kubva kuHanoi. Inoenda kaviri pasvondo, Chipiri neChishanu na2 pm uye inosvika muBeijing mazuva maviri gare gare na5 pm. Inosvika muPianxing pakati pehusiku, Nanning na8: 40 am uye Guilin na7: 20pm. Zviri yakapusa asi inodhura, Hongu zvirokwazvo.
Muchisarudzo chechipiri, iwe unotora chitima chenguva yemanheru kuenda kuLao Cai, kuyambuka muganho ipapo wotora chitima kana bhazi zvakare kubva Kunming kuenda Hekou. Chitima chehusiku zvakare chinomhanya pano kaviri pavhiki, Chishanu neSvondo, kubva kuHanoi. Iri basa rinoenda na9: 30pm uye rinosvika Kunming North Station na7: 25 am.
Kutaura nezvezvitima zvakakurumbira uye zvakanaka Trans-Siberian Chitima kana Trans-ChiMongoria iri zvakare sarudzo. Kana iwe uri en Khazakisitani unogona kuyambuka kubva Almaty kuenda Urumqi o Yining, uye kana iwe uchitova mukati medunhu reChinese, muHong Kong neMacao, nekuti kuyambuka muganho kuri nyore uye kwave pedyo.
Sezvaunenge waona mune sarudzo Kuyambuka muganho kuyambuka pakati peChina nevavakidzani vayo kunoitwa nemugwagwa kana chitima saka kune mabhazi mazhinji izvo zvinouya uye enda zvakare.
Kubva kumabvazuva unogona kusvika munyika kuburikidza kuyambuka miganhu miviri neVietnam uyewo kubva kuMyanmar nekuLaos. Kubva kuPakistan tatozvitaura, kuburikidza neKarakoram Pass uye kubva kuNepal kuburikidza neEl Tibet.
Ramba uchifunga kuti hapana kuyambuka muganho pakati peChina neIndia izvo zvakavhurika Huye, hukama hwezvematongerwo enyika hausi mune akanaka kwazvo izvozvi. Parizvino tinogara tichitaura nezvemabhazi, masikati neusiku, asi ... Unogona kutyaira mota here?
Ichokwadi ndechekuti maonero akajairika anosimbisa chokwadi chekuti zvine njodzi uye zvinotsausa kuenda kuChina nemotokari kana iwe uri mutorwa uye usina kuraira kwakazara kwemutauro. Around pano vanhu havataure Chirungu uye kuita kuti unzwisisike kunogona kuve gehena.
Uye zvakare, iyo yekupinda yakanakisa yekuita nemotokari iri kuburikidza neEl Tibet, nzvimbo inotonhora zvakanyanya rinenge gore rese. Iwe uchiri kunzwa seiko? Ipapo iwe unofanirwa kuziva kuti kubva kuNepal unogona kuyambuka nemotokari pamuganhu uri pakati Kodari uye Zhang mu, nemoyo murefu chokwadi, iwo mapepa.
Iwe unogona zvakare kupinda nemotokari kubva kuMyanmar. Zvese izvi zvine visa zvakarongeka nemapepa emota. Iyo mvumo yekutyaira kubva munyika yako, iyo mvumo yenguva pfupi yakapihwa nehurumende yeChina nemvumo yepasi rose, zvingangoitika.
Iwe unofanirwa kugara uchifunga izvozvo Kunyangwe iwe uchigona kutyaira muChina, iwe unofanirwa kuita kuti rwendo rwako ruzivirwe zvisati zvaitika. MuChina, vekunze vanogona kungotyaira pane dzimwe nzira saka kana izvi zviri zvirongwa zvako, ita shuwa ruzivo rwese kuembassy.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » Ndeipi nzira yekuenda kuChina? Ndege, zvitima uye dzimwe nzira
Luis rene akadaro
shamwari, unogona kuenda kuChina here? Ndiri kufarira kuziva matipi uye zvinhu, ini ndoda kuenda!
Pindura kuna luis rene
5 zhizha getaways kubva kuLondon
Guatapé, iro rakanakisa dhorobha muLatin America